Wadada isku xidha Feerfeer iyo Tuulada Abaaleey - Cakaara News
Wadada isku xidha Feerfeer iyo Tuulada Abaaleey
Feerfeer( Cakaaranews )Sabti 26ka March 2016, Geedka Garanwaaga looyaqano oo ah geed aan anfac iyo faa’iido midna u lahayn dadka iyo duunyada labadaba islamarkaana dhibaato ba’an ku haya daaqa iyo dhirta kale ee kasoobaxda dhulka, kuna faafay wadooyinkii iyo jidadkii ay bulshadu maraysay. Si loo dabargooyo geedkan cadawga ah ayaa maamulka degmada feerfeer, shaqaalaha iyo waliba shacabka ku dhaqan degmada ay siwada jir ah saaka u bilaabeen gurida geedkan iyagoo ka bilaabay wadada wayn ee isku xidha qabalaha abaaleey iyo degmada Feerfeer.
Hadaba Gudoomiyaha Degmada Feerfeer mudane Maxamed Khadar Faarax oo u waramay shabakada wararka ee cakaaranews ayaa sheegay in saaka subaxii ay bilaabeen shaqo balaadhan oo lagu qardaynayo ama lagu gurayo geedka Garanwaaga oo qaatay wadooyinkii iyo meelihii dooga iyo dhirtuba kasoobaxaysay. Waxa uuna gudoomiyuhu xusay in ay gacmo wada jir wax ku gooyaan isalamarkaana ay saaka gureen geedkii garanwaaga ahaa ee qariyay wadada isku xidha magaalada feerfeer iyo centerka abaaleey taasoo lagu qabtay kaqaybgalka bulshada.
Sidookale waxa uu gudoomiyuhu xusay in shaqadan lagu dabar jarayo geedka garanwaagu aysan ahayn tii ugu horaysay ee ay si wada jir ah u qabtaan bulshada iyo maamulka dagmadu islamarkaana ay hada ka hor siwada jir ah uga gureen magaalada iyo waliba qayba kamida qabaleeyada.
Ugudanabayna wuxuu u mahadceliyay sida wanaagsan ee muwaadinimada leh ee ay uga qayb qaateen bulshada qaybaheeda kaladuwan ee degan degmada feerfeer, shaqaalaha, maamulka degmada feerfeer iyo waliba qaar kamida ciidanka degmada jooga.